टिका सानुको देवर भाऊजुले गाएको दोहोरी युटुवमा हिट, रातारात बन्यो भाईरल (भिडियो) – List Khabar
Home / मनोरंजन / टिका सानुको देवर भाऊजुले गाएको दोहोरी युटुवमा हिट, रातारात बन्यो भाईरल (भिडियो)
admin November 28, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 90 Views
पछिल्लो समय नेपालि लोक तथा दोहोरी गित क्षेत्रको सांगितिक बजार निकै फराकिलो वन्दै गएको छ | त्यसमा पनि प्रत्यक्ष घम्साधम्सी लाईभ दोहोरी भन्ने वितिकै नसुन्ने स्रोता कमै छन् । प्रत्यक्ष घम्साघम्सि लाईभ दोहोरीको क्रेज बढेसंगै नेपालि लोक गित संगितको पनि छुट्टै पहिचान वनेको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालको मार्फत बाट गित संगित गायक गायिका भाईरल वनेका छन् । भने कति पय नया सिर्जना विकास हुदै नव कलाकारको उत्पादन पनि बढ्दै गईरहेको छ । कुष्ण कडेलको इन्द्रेणी कार्यक्रम र कमल कुमार विकको सारङ्गि संसार, त्यस्तै खेलौ जुहारी, जुनकिरी लगायत अन्य लाईभ दोहोरी कार्यक्रमहरु युटुवमा अत्यन्तै रुचाईएको लाईभ दोहोरी कार्यक्रम हो ।
पछिल्लो समय सांगितिक बजारमा लाईभ दोहोरीको क्रेज निकै राम्रो छ , सबै दर्शक स्रोताहरुको नजरमा निकै लोकप्रिय वनेको छ , यसो त भाईरल स-साना वाल गायक गायिकाहरुको आगमनले पनि लाईभ दोहोरीको छुट्टै क्रेज वनेको दर्शकहरुको प्रतिकृया पाईएको छ , भने युटुव प्राय लाईभ दोहोरीका भिडियो नै ट्रेडिङ्गको अग्र स्थानमा रहने गर्छन् ।
यसैविच पछिल्लो समयका नेपाली लोक गितसंगितको मौलिकतापन झल्काऊने लोक गायिका साथै सबैको मनमुटुमा बसेकी अत्यन्तै लोकप्रिय दोहोरी गायिका टिका सानु एक लोकप्रिय चर्चित गायिका हुन् । पछिल्लो समय उनि लाईभ दोहोरी, गित रेकडिग, सुटिग साथै टिकटकमा व्यस्त भएकि छिन । उनि आफ्ना फ्यानहरुलाई मनोरन्जन दिनको लागि पछिल्लो समय Prime HD Tv मा संगितमाला कार्यक्रम संगै टेलीसिरियल ‘कथा माईली’को प्रस्तुत गरिरहेकी छिन् ।
यति वेलाको सांगितिक माहोलमा टिका सानु चर्चा परिचर्चा अत्यन्तै रहेको छ भने उनलाई माया गर्ने, उनका दोहोरी मन पाऊने साथै गितहरु मन पराऊने फ्यानहरु, फ्लोअर्सहरु धेरै छन् । यसै विच यति वेला युटुव ट्रेनिङमा हेर्ने हो भने टिका सानु युटुव च्यानलबाट आएका लाईभ दोहोरी अग्रस्थान छन् ।
लोकप्रिय भाका ‘मायाको गाऊंतिर’ बोलको गीतमा चर्चित वाल गायक किसन सिजापती र गायिका टिका सानुले गाएको दोहोरी भखरै सार्नजनिक भएको छ । विवाह पछिको नया घरजाम सुरुवात संगै देवर भाऊजुको घरायसी कुराकानीलाई दोहोरी बाट प्रस्तुत गरिएको छ, किसन सिजापतिले देवर र टिका सानु भाऊजुको रुपमा प्रस्तुत भई अत्यन्तै रमाईलो भाकामा मिठा शब्दहरुले सजिएको दोहोरीलाई छोटो समयमा नै युटुवमा धेरै दर्शकहरुले रुचाएका छन् |
लाईभ बाजामा साथमा रमाईला लोक तथा दोहोरी गितहरु सुन्न र हेर्न साथै नया नया भिडियो गितहरु हेर्नका लागि Tika Sanu को अफिसियल युटुब च्यानललाई Subscribe गर्न नभुल्नुहोला । साथै यस च्यानलमा रहेका नयाँ पुराना सबै भिडियोहरुलाई लाईक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला !!
Previous हेर्नुहोस लाइसेन्स परीक्षामा खुल्यो नयाँ रहस्य: ट्रायल फेल भएपनि १२ हजार रुपैयाँ दिए पास !
Next विवाहको पहिलो रात दुलहीले श्रीमानको यस्तो देखेपछि चालिन यस्तो कदम दुनिया चकित